जानकी मन्दिरको एउटा नृत्यमाथी चौतर्फी आलोचना, संस्कृति र मौलिकता बचाउने कस्ले ? – Mission Khabar
जानकी मन्दिरको एउटा नृत्यमाथी चौतर्फी आलोचना, संस्कृति र मौलिकता बचाउने कस्ले ?
मिसन खबर २५ माघ २०७५, शुक्रबार १०:४६
जनकपुर– जनकपुरधामको प्रमुख धार्मिकस्थल जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा भएको सांस्कृतिक कार्यक्रमको एउटा गीत र नृत्य अहिले चौतर्फी आलोचना बनिरहेको छ । सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र धनुषाद्वारा गरिएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा अश्लिल गीत एवं नृत्य प्रदर्शन गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको हो ।
यो आलोचनाले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ । प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनीतिकर्मी सहभागी भएको सांस्कृतिक कार्यक्रममा यस प्रकारको गीत बज्नु र नृत्य हुँनुलाई अधिकांशले अस्वभाविक भन्दै आएका छन् । अझ, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उच्च पदस्थहरुको सहभागिता भएको कार्यक्रममा कसैले यस्तो गतिविधि नरोकेकोमा उनीहरुको सहभागिको पनि आलोचना भैरहेको छ ।
हाम्रो मौलिकता, भजन किर्तनमा बाह्य प्रभाव बढ्दै गरेको अनि अस्लिलता घुस्दै गरेको एउटा उदाहरण पनि हो जानकी मन्दिर परिसरमा देखिएको यो प्रकरण । आफ्नो संस्कृति र मौलिकता बचाउन राज्यसँग व्यक्ति स्वयम पनि सचेत बन्ने हो कि ।